Maamulka gobolka Banaadir oo hakiyay Ceymiskii qasabka ahaa ee lagu soo rogay gaadiidleyda Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Maamulka gobolka Banaadir oo hakiyay Ceymiskii qasabka ahaa ee lagu soo rogay gaadiidleyda Muqdisho
Maamulka gobolka Banaadir ayaa shaaciyay inuu hakiyay howlihii Ceymiska ee shirkadda Takaaful, kaddib cabasho iyo banaanbaxyo ay maalintii shalay sameeyeen darawalada gaadiidka dadweynaha BL-ka ee ka shaqeeya magaalada Muqdisho iyo naxaawigeeda.
Madaxda maamulka gobolka Banaadir iyo saraakiisha amniga oo maalintii shalay kulan ku yeeshay xarunta dowladda hoose ee magaalada Muqdisho ayaa markii uu kulankaasi soo dhammaaday kadib shaaciyay in la hakiyay dhamaan Ceymiskii qasabka ahaa ee lagu soo rogay gaadiidka dadweynaha.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir C/fitaax Cumar Xalane ayaa saxaafadda u sheegay in la hakiyay dhamaan howlihii Ceymiska gaadiidka ahaa, lana aqbalay codsiga gaadiidleyda, laakiin wax faahfaahin ah kama bixin arrintaan.
“Waxaa rabaa inaa gaadiileyda BL-ka u sheego in codsigooda iyo cabashooda la tixgeliyay, wuxuuna maamulka gobolka Banaadir joojiyay howlihii Ceymiska ahaa ee shirkadda Takaful” Sidaas waxaa yiri C/fitaax Xalane.
Maamulka gobolka Banaadir ayaa noqday halka dadka Muqdisho loo soo maro, si xilligaan kala guurka ah dadka looga qaado lacago magacyo kala duwan ah leh oo shirkado gaar loo leeyahay ay ku qaadayaan magaca dowladda.
Shirkadda Takaful ayaa ah shirkad gaar loo leeyahay, waxayna dhawaan heshiis la gashay maamulka gobolka Banaadir, kaas oo ku saabsan qorshaha Ceymiska looga qaadayo gaadiidka ka howlgala magaalada Muqdisho, waxaana arrintaan sharci darro ku tilmaamay hanti dhowrka iyo garyaqaanka guud ee dalka.